Posted: Adoolessa/July 24, 2015 · Finfinne Tribune | Gadaa.com | Comments (3)
Har’a kan dur caalaa haalli Oromiyaa fi Oromoon keessa jiran baay’ee baay’ee yaaddessaa ta’ee jira. Diinni tooftaalee adda addaatti fayyadamee, duguuginsa sanyii nurratti dalagaa jira. Saba bal’aa gara saba bicuutti jijjiiruuf ciminaan irratti hojjetamaa jira. Dachee Oromiyaa cicciranii dhiphisuuf; kan hafte sanaayyuu bakkee lamatti addaan kutuuf; lakkoofsa uummata keenyaa xiqqeessuuf duula hamaa nurratti gaggeessaa jirti Wayyaaneen. Gochii duguuginsa sanyii Oromoo kanatti milkaayuuf, tooftaalee Wayyaanotni lafa kaawwatan keessaa inni tokko Maastar Plaanii Finfinnee ti. Karoora kana bakkaan gahuuf, tooftaa isaan baafatan keessaa inni tokko waayee misoomaa fakkeessanii; Oromoota fedhii dhuunfaatiif dursa kennan ofitti harkisuuf maqaa “DIYAASPORAA OROMOO” jedhuun Oromoo oromoodhaan balleessuuf karoorfatanii jiru. Har’a Oromoon yaamicha kanaaf owwaachuun hafee; gamtaadhaan tokkummaadhaan shira kana dura dhaabbachuu baatnan badiin nutti dhufaa jiru jala kaattuu diinaatiifillee waan hafuu miti.
Yeroo Oromoon walbira dhaabbatee tokkummaadhaan diinaan falmu amma ta’uu baatnan, bilisummaan nu barbaadnu fi Oromiyaan nuti ijjaarrachuuf hawwinus abdjuu ta’anii hafuu akka danda’an shakkiin hin jiru. Kun sodaa fi abdii kutachuus miti; balaa namatti deemaa jiru alaalatti arguu danda’uu dha. Kan amma nu nyaachaa jiran Wayyaanotni nama-nyaaatan otuu jiranuu; warri sirna durii sana nutti deebisuuf hawwii fi abjuu qabanuu kutatanii loluuf
qophaayaa yeroo jiran kana Oromoon callisee taa’uun; fedhii sabaa dhiisee kan dhuunfaatiif dursa kennuun badiitti nu geessa jedheen amana. Hamma balaan deemaa jiru tokko nama bira gahee harkaan nama qabatutti ykn nama hudhutti callisanii ilaaluun badiif of qopheessuu dha. Shira diinni nurratti dalagaa jiru dura dhaabbachuuf; qabsoo keenyas cimsinee uummata keenya gadadoo fi qaanii keessaa baasuuf qabxiilee armaan gadii akka dhaamsa Oromummaatti dhiyeessuun fedha:
Oromoon amantii fi ilaalcha fedhe haa qabaatu, garuu akka ilmaan abbaa fi haadha tokkootti wal jaalachuu, wal kabajuu, wal obsuu fi keessumaayyuu ammoo yeroo rakkoo walbira dhaabbachuu;
Jiruu fi jireenya gaarii har’aatiif yookaanis bu’aa yerootiif jennee fedhii uummata bal’aa Oromoo kan faallessu, diina jala kaachuu fi ergamtuu isaanii ta’urraa of qosachuu;
Oromoon akka nama tokkoottis ta’ee gamataadhaa dirqama Oromummaa bahuuf maaltu narraa/nurraa eegama jedhee/jettee ofgaafachuu fi karaa danda’amu hundaan qabsoo kanaaf gahee taphachuu ykn/fi qooda gumaachuu;
Uummata ijaaramee fi gurmaayetu humna ijaaruu waan danda’uuf, bifuma fedheenuu haa ta’u wal ijaaruu fi uummata keenyaaf sagalee ta’uu;
Tokkummaan jaarmayootni Oromoo uuman ykn uumuu barbaadan, tokkummaa waraqaarratti mul’atu qofaa otuu hin taane, kan hojiidhaan agarsiisee bu’aa ykn jijjiirama tokko fidu ta’uu qaba;
Karaa nagaatiin qabsoon kun milkaayuu akka hin dandeenye hubatamee; qabsoo hidhannoo cimsuu; Waraanna Bilisummaa cimsuuf Oromoon hunduu dirqama ofii bahuu qaba. Akkuma OMN kunoo maallaqa uummataatiin ijaaramee milkaaye, maallaqa uummata Oromootiin Waraana Bilisummaas jabeessuu fi cimsuuni ni danda’ama;
Warri, qabsoon karaa nagaas ittifufuu qaba jedhanii tooftaa kanarratti cichanillee caalaatti kan sodaatamuu fi kabajamuu danda’an qabsoon hidhannoo yoo duubaan cime qofaa dha jedheen amana; Kanaafuu, isanillee qabsoo hidhannoo balaaleffachuu dhiisanii karaa lafa jalaatiin deeggarsa godhuu qabu;
Kayyoo addaa addaa fi karaa garagaraallee yoo hordofan, jaarmayootni Oromoo walaba ta’anii ijaaraman kaayyoo fi karoora waloo kan yeroo gabaabaa tokko uummachuu fi isa kana bakkaan gahuuf TUMSA ijaaruu;
Hoggantootni jaarmayoota amma jiranii hunduu, dhaloota haaraa ofjalatti ijaaranii hogganummaadhaaf qopheessuu; suuta suuta hoggantoota dhaloota haaraatti dirqama dabrsuu fi ofiif gahee gorsaa taphachuu;
Hoggantootni jaarmayoota Oromoo, haala qabsoo kana ittiin gageessani fi aadaa hogganummaa ittin kennan yookaanis adeemsa (approach) isaanii jijjiiruudhaan hogganoota uummata wajjin quba walqabu; kan uummataan mar’iatu fi uummata mari’achiisee yaada uummataa dhagawus ta’uu qabu.
Qabsoon uummata keenyaa, har’a qabsoo bilisummaa qofaa otuu hin taane, caalaatti qabsoo jiruu fi jireenyaa waan ta’eef, uummatni keenya jiruu namaa gadii fi gadadoo kana keessaa akka bahu ilmi/intalli Oromoo dirqama Oromummaa bahuu qaba/qabdi. Dirqama kana bahuunis yeroon isaa amma.
Obboo Abdii dursee otoo barruu tee guutuu hin dubbisin jechuma mata duree barruu teetii ilaalee dhugaa irraa sodaatamu hundeeffadhee siif deebisuu yaala.
Ummatni Oromoo gadadoo keessaa ka bahuu danda’u
1.Yoo OPDO hoggaantota Waa yaadneen irra keettee ummata keenyaan bitaa jirtu of irraa geegessitee walaba taatee ummatatti dhugaa turee fi jiru ifa baastee akka mari’atee falachuu danda’u goote.
2.Yoo gartuuleen Asmaraa teette dantaa Sha’abiyyaatiif ummata fajaajessitu dhiistee,nuti harka alagaa keessa jirraa homaa harkaa isiniif hinqabnu nu dhiisaa faladhaa ummata Oromootiin jeettee dhugaa itti himtee,mari’tee falatee gadadoo isaan diinaaf tumsaa keessatti darban keessa ba’uu danda’a.
Obbo Abdi Boruu wan ati tarreesite kun martinuu jedhamee, himamee dadhabame. Qabsoon Oromoo erga hidhame waggan 20 oltarera. Dubbin akkuma jedhame warri qabsoo hidhannoo gaggesina jedhan gadi bahanii soda tokko malee dhugaa jiru uummatatti himuu qabu. Qabsoon hidhannoo akka arginutti bu’aa inni fide hin jiru. Jiraachuun isaas nama shakkisisa. Yeroo akkana jedhamu warri hedduu dallanan jiru.Haala qasoon itti burjaja’uu danda’ef isaan qofatu itti gaafatama jechuu miti. haala adunyaa fi keesumaa siyaasa biyyota ollaa keenyaa keessatti uumamedha gar tokko kan sakaalee qabe. Sakaalaa kana keessaa bahuf garuu wanti hojjetame tokkole hin jiru jechun ni danda’ama. Jarreen Asmaraas ta’e warri Ameerikaa kana booda haala kana jijjiru jedhamee kan yaadamu miti.
Kanaafuu falli jiru ofif dadhaban horiin walitti buusamee Faranjille haata’u gorsituu bitachudhan fala barbaaduun yoo danda’amef yaaluu dha.
jalaata jima. Reply
Obbo boruu,thank you.what raised is real.your concern is very legitimate.it is time to stand against those collabrators,in the diaspora, who are ready buy /sell in the name of “misooma”.
This blood trusty wayyanee leaders, are on the verge of implementing the recent master plan of expansion for oromo student died.
How long this will continue.
May it is time for independent liberation leaders
1/ work togethor on the national interest as oromo nation.
2/make the struggle popular stuggle, (instead of abc organization).you see why omn is so successful.
If we do that we shall over come and get back our country from colonizers.